Daawo: Waajibka Qur’aanka Innaga Saaran Iyo Qisooyin Markhaati U Ah [MIDHAHA DIINTA] | Gacanlibaaxnews
Daawo: Waajibka Qur’aanka Innaga Saaran Iyo Qisooyin Markhaati U Ah [MIDHAHA DIINTA]
April 20, 2017 - Written by C M
Muuqaalkan kooban waxa aad kaga bogan doontaan farriin muhiim ah oo ku saabsan qof muslimka ah waajibka ka saran qur’aanka kariimka ah iyo ku camal-falkiisa ba. Waxaana qodobkan ka hadlaya sheekh Almis Yaxye Xaaji Ibraahin.
Waana muqaal uu idiinku talo galay barnaamijka MIDHAHA DIINTU. Ka faa’idaysi wanaagsan oo ku camalfal fiican. Ilaahay xaqa ha innagu sugo. Sheekhana ajar iyo xasanaad ha ka siiyo.